Paikady laharam-pamehan'ny skotisma - Tily eto Madagasikara
Datin'ny lahatsoratra 5 avril 2014
Politika Nasionaly Fanabeazana Tily 1821Télécharger
Fiombonana anaty fahasamihafana
Fiantraikany amin’ny fiaraha-monina
Hitondra fanovàna tsara, vokatra tsara amin’ny ﬁarahamonina misy azy ny ﬁkambanana. Mandray anjara amin’ny asa ho an’ny ﬁarahamonina ny skoto tsirairay ka mizara ny traikefany mba hitarihany ny manodidina azy hanao toy izany koa. Ireo hetsika sy tetikasa skoto no ﬁtaovana handraisan’izy ireo anjara eo amin’ny ﬁarahamonina misy azy ka hahatonga azy ireo ho mpitarika mitondra fanovàna tsara.
Serasera sy fifandraisana ivelany
Ny ﬁvoriamben’ny skoto eran-tany tany Ljubljana, Slovenia ny taona 2014 no namaritra ny paikady laharam-pamehana.
← Lalàna folo Tily → Ny mpiandraikitra Tily sy ny kalitao